Qiimaynta Ku-Hufnaanta Akhrinta - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Ardayda akhriska ku habboon waxaa la qiimeeyaa xilliga dayrta, jiilaalka, iyo xilliga gu'ga ee fasalada K-5 si loo cabbiro horumarka xagga aqrinta afka, qiyaasta saxnaanta akhriska iyo heerka. Ku-habsashada akhrisku waxay xiriir weyn la leedahay fahamka akhriska ardayda. Waxaa jira cabbiro kala duwan oo ku-habboonaanta hadalka iyadoo ku xiran heerka fasalka ilmaha iyo luqadda koowaad ee waxbarista.
Qiyaas kasta oo ku-habboonaanta waxaa lagu qeexay hoos heerka fasalka iyo barnaamijka:
Fasalka Ingiriis Shiineys Isbaanish
K Cod Xaraf Magacaabista Sawirka Cod Xaraf
1 Akhriska Afka Akhriska Afka Syllable / Akhrinta
2-5 Akhriska Afka Akhriska Afka Akhriska Afka
Macluumaad noocee ah ayaan filayaa inaan ka helo cunugayga?
Waalidiintu waxay ku daawan karaan macluumaadka ku saabsan waxqabadka ilmahooda qiimeynta qummanaanta saddex jeer sanadkii Skyward. Waalidiintu waxay arki doonaan lambar muujinaya tirada ereyada saxda ah, xarfaha, dhawaaqyada, sawirada ama jilayaasha. Waxay sidoo kale tilmaamaysaa haddii waxqabadkani uu yahay heer darajo. Sharaxaadyadani waxay u dhigmayaan sida ay u kala horreeyaan tallaabooyinka hufnaanta ee Skyward:
LSF Ingiriisiga ( Fududeynta Dhawaaqa Xarafka): Markii la siiyo liistada xarfaha aan kala sooca lahayn, ardaygu wuxuu ku dhawaaqayaa dhawaqyo badan oo alifbeetada ah hal daqiiqo.
Ingiriisiga ORF (Ku-Hufnaanta Akhriska Afka): Ardaygu wuxuu akhrinayaa marin-heer-fasal ah hal daqiiqo. Tirada ereyada si sax ah loo akhriyey ayaa la duubay. Ardaygu wuxuu aqriyaa seddex marin oo kaladuwan dhibcaha dhexdhexaadka (dhexe )na waa la duubay.
MAZE Ingiriisi: Qiyaastan waxaa loo isticmaalaa inta badan ardayda dugsiga sare. Waa cabbiraadda fahamka aqrinta iyadoo si sax ah loogu dhammaystirayo ereyada maqnaa sheeko gudaheeda.
LSF Isbaanishka ( Hufnaanta Dhawaaqa Xarafka): Markii la siiyo liistada xarfaha aan kala sooca lahayn, ardaygu wuxuu ku dhawaaqayaa codad badan oo alifbeetada ah hal daqiiqo.
SRF-Isbaanishka (Farsamaynta Akhriska ee Syllable): Ardayda waxaa laga codsanayaa inay hal daqiiqad kaliya ku akhriyaan dhawaaqyada Isbaanishka. Marka ay ardaydu akhriyaan jumladaha waxaa lagu qiimayn doonaa ku hadalka af Isbaanishka si fiican ugu hadla.
ORF Isbaanishka (Ku-Hufnaanta Akhriska Afka): Ardaygu wuxuu aqrinayaa marin-heer-fasal ah hal daqiiqo. Tirada ereyada si sax ah loo akhriyey ayaa la duubay. Ardaygu wuxuu aqriyaa seddex marin oo kaladuwan dhibcaha dhexdhexaadka (dhexe )na waa la duubay.
PNF-Shiine (Saamaynta Magaca Magaca): Ardaydu waxay hal daqiiqo ku magacaabaan sawirada waxyaabaha caadiga ka ah Shiinaha. Qiyaastan waxaa la qiimeeyaa oo keliya xilliga jiilaalka iyo xilliga gu'ga.
Pinyin-Shiine: Ardaygu wuxuu aqrinayaa marinka heerka fasalka hal daqiiqo. Tirada si sax ah loo akhriyey ayaa la duubay. Ardaygu wuxuu aqriyaa seddex marin oo kaladuwan dhibcaha dhexdhexaadka (dhexe )na waa la duubay. Markay ardaydu ka gudbayaan darajooyinka waxay ka guurayaan Pinyin una gudbayaan astaamaha astaamaha ku-hadalka.
Dabeecad-Shiine: Ardaygu wuxuu akhrinayaa marin-heer fasal ah hal daqiiqo. Tirada jilayaasha si sax ah loo aqriyay waa la duubay. Ardaygu wuxuu aqriyaa seddex marin oo kaladuwan dhibcaha dhexdhexaadka (dhexe )na waa la duubay.
Sideen u arkaa dhibcaha?
Ka soo gal My SSO. (Haddii aadan garanaynin gelitaankaaga iyo lambarkaaga sirta ah, la xiriir family.helpdesk@minnetonka.k12.mn.us )
Guji astaanta Skyward.
Xulo magaca ilmaha aad rabto inaad u aragto dhibcaha dusha shaashadda dusheeda.
Guji "Tijaabada Tijaabada" dhinaca bidix ee shaashadda.
Waxaad markaa dooran kartaa "muuji dhibcaha" qiimeynta aad rabto inaad aragto, marka si fiican loo hadlo. Waxaad arki doontaa xogta dayrta, jiilaalka iyo guga adoo fiirinaya taariikhda imtixaanka dayrta.
Ilmahaagu MA yeelan doono dhibco dhammaan aagagga. Ilmahaagu wuxuu yeelan doonaa buundooyin lagu duubay sanduuqa (yaasha) kuwaas oo ku habboon heerkiisa ama barnaamijyadeeda. Tusaale ahaan, haddii cunuggaagu ku jiro Isbaanishka ama Imtixaanka Shiinaha wuxuu heli doonaa oo keliya dhibcaha Iswidishka ama ku-hadalka Shiinaha illaa iyo inta barashada Ingiriisigu ka bilaabmayo fasalka saddexaad.
Caadooyinka Akhriska Ku-Hufnaanta ee Heerka Fasalka